Degdeg Madaxwayne Farmaajo oo Dooroshooyinka, amniga KU wareejiyay Raysulwasaare rooble | HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Degdeg Madaxwayne Farmaajo oo Dooroshooyinka, amniga KU wareejiyay Raysulwasaare rooble
Degdeg Madaxwayne Farmaajo oo Dooroshooyinka, amniga KU wareejiyay Raysulwasaare rooble
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo goordhaew khudbad xasaasi ah u jeediyay Xildhibaanada golaha shacabka oo maanta isugu yimid kulan aan caadi aheyn uu dalbaday Madaxweynaha.
Farmaajo ayaa khudbadiisa uga hadlay arimo kala duwan oo ugu horeeso waxqabadka dowladiisa, waxa uu sidoo kale ka hadlay arimaha doorashada iyo heshiisyadii kala duwanaa ee Xildhibaanada golaha shacabka ansixiyeen.
Waxa uu sheegay Farmaajo in khalalaase iyo dagaalo ka dhasheen sharcigii Xildhibaanada ansixiyeen ee la doonayay in dalka uga dhacdo doorasho qof iyo cod , waxa uuna xusay si looga baaqsado talaabadaasi in uu doonayo in mar kale laga laabto go’aankaasi.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ka codsaday Xildhibaanada golaha shacabka in dib uga laabtaan sharciga jiheynta doorashada ee meel mariyeen 12kii april dibna loogu laabto heshiiskii doorashadsa ee gaareen Dowlada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada.
Farmaajo ayaa ugu dambeyn Xildhibaanada golaha shacabka u sheegay in hoosha iyo diyaarinta doorashada iyo arimaha amaanka uu la wareegay Ra’isul Wasaare Rooble oo hada kadib shaqadaasi looga fadhiyo.
Waxa uu sidoo kale Madaxweyne Farmaajo u xil saaray Ra’isul Wasaare Rooble qaban qaabada iyo iclaaminta shirka Dowlada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyada oo la raacayo heshiisyadii horey loo gaaray oo shuruud la’aan ah.
Madaxweynaha ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta mucaaradka ku ah in ay ka shaqeeyaan xasiloonida iyo nabad galyada, waxa uuna cadeeyay in muhiim tahay in wax walbo wadahadal lagu dhameeyo.
Xildhibaanada golaha shacabka ayaana ugu dambeyn aqbalay codsigii Madaxweynaha, waxa ayna ka laabteen sharciga doorashada ee muranka dhaliyay iyagoona dib ugu labatay heshiiskii hore ee doorashada.
Previous articleMadaxweyne Qoorqoor oo Hambalyo Udiray Shaqaalaha Galmudug.
Next articleGanacsade dhowr maalin kahor Gurigiisa lagala baxay oo meydkiisa Caawa laga helay Magaalada Gaalkacyo